छठसम्म पनि हाम्रा माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा जान्छौँ—सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेता, तमलोपा – Maitri News
छठसम्म पनि हाम्रा माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा जान्छौँ—सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेता, तमलोपा
maitrinews October 4, 2016
संघीय समाजवादी फोरमले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्न थालेको केही हप्तापछि मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि प्रचण्ड सरकारको विरोध सुरु गरेको छ । मधेसका समस्या समाधानका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न समर्थन गरेको भन्दै तमलोपाका नेता सर्वेन्दनाथ शुक्लाले माग पूरा नभए सडकमा जाने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिसँग असन्तुष्ट रहेको खुलेरै कुराकानी गर्नुभयो । छठसम्म पनि माग पूरा नभए सरकारका विरुद्धमा लाग्ने चेतावनी दिनुभएको शुक्लाले मैत्री न्युज डटकमसँग गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग केही मनमुटाव भएको हो ?
तराई–मधेस केन्द्रित दलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अधयक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने बेलामा गरेको चार बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तराई–मधेस, आदिवासी–जनजाति, उत्पीडितका मुद्धालाई पन्छाएर जसरी तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले संविधान जारी गरे । त्यसमा तराई–मधेस, आदिवासी–जनजाति, उत्पीडितले सुरुमै असहमति व्यक्त गरेका हुन् । संविधानप्रति असहमति रहेकै कारण हामीले मधेस आन्दोलन जारी राखेका थियौँ । संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । पछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । दुबै सरकारले हाम्रा मागको सम्वोधन गर्न नसकेकाले हामीले मधेस आन्दोलन जारी राखेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले प्रष्ट रुपमा भनेर नै समर्थन गरेका हौँ । यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
अनि जुन माग तपाईहरुले राख्नु भएको हो । ती मागका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी भएको छ त ?
निश्चित रुपमा हामीले उहाँहरुसँग हाम्रा मागका बारेमा पकट–पटक कुराकानी गरेका छौँ । त्यही विषयमा छलफल पनि भएको छ । उहाँहरुले हामीलाई हुन्छ, भैरहेको छ, गर्दै छौँ पनि भन्नुभएको छ ।
ए भनेपछि तपाईँहरुका मागका बारेमा त नेपाली कांग्रेस र माओवादी त सकारात्मक नै रहेछन् नि त ?
मैले अघि पनि भने । उहाँहरुले हामीलाई हुन्छ, भैरहेको छ, गर्दैछौँ मात्रै भन्नुभएको छ । तर, हाम्रा मागका बारेमा उहाँहरु दुबै दल एक ठाउँमा भएको अनुभूति भएको छैन । उहाँहरुले हामीलाई विश्वास दिलाउँने गरी काम अघि बढाउँन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुको कामको गति हेर्दा हामीलाई शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । सुरु–सुरुमा उहाँहरुले निकै सक्रियता देखाउनु भएको थियो । त्यो अहिले विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । यसले सम्झौतामा असर गर्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
भनेपछि तपाईँहरुका माग सम्बोधनका लागि सबै भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा आउनु प¥यो भन्ने तपाईँहरुको भनाई हो, होइन त ?
हो, हामीले यही भन्दै आएका छौँ । जबसम्म कांग्रेस र माओवादी हाम्रा मागका बारेमा एक ठाउँमा आउँने वातावरण निर्माण हुँदैनन । तबसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरा पनि बलियो बन्दैन । संविधान संशोधन लगायतका मुद्धा पनि उहाँहरु एक ठाउँमा नआईकन समाधान हुँदैनन् । हामीले उहाँहरुको आश्वासन होइन, काम खोजेका छौँ । हामीलाई आश्वासन त पहिला–पहिला पनि आएकै हुन् नि । अब हामी आश्वासनमा होइन काममा मात्र विश्वास गर्छौ । तपाईँहरुका मागमा हामी अन्तिम–अन्तिमतिर पुग्यौँ भन्नुहुन्छ । तर, कुन खालको अन्तिम–अन्तिम हो । हामीलाई नै थाहा छैन । उहाँहरुले हाम्रा मागको सम्वोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म विश्वस्त हुने कुरा छैन ।
ए भनेपछि पछिल्ला दिनमा उहाँहरुले तपाईँहरुका माग सम्बोधनमा केही ढिलाई गरेको अनुभूति तपाईँहरुले गर्न थाल्नु भएको छ, होइन त ?
हो, मैले अघि पनि भने नि, उहाँहरु सुरुसुरुमा निकै सक्रियताका साथ अघि बढ्नु भएको थियो । छलफल पनि भएका थिए । तर, अहिले उहाँहरु हराउनु भएको छ । हाम्रा मागप्रति उहाँहरु विस्तारै टाढाटाढा हुँदै जानु भएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । यसले थप समस्या ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले उहाँहरुले यो दशैँ, तिहार, छठ अघि नै समस्या समाधान गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । भएन भने यसको परिणाम गलत आउनसक्छ । त्यसको सबै जिम्मेवारी उहाँहरुले नै लिनुपर्छ ।
भनेपछि अब तपाईँहरु र सरकारबीचको सम्झौता विस्तारै संकटमा पर्दै आयो भन्ने बुझ्नु प¥यो, होइन त ?
संकट नै त नभनौँ । तर, ढिलासुस्तीले केही समस्या चाहिँ उत्पन्न भएका छन् । हामीले जुन मागसहित उहाँहरुलाई समर्थन गरेको हो । त्यो समर्थन फिर्ता लिएर हामी फेरि सडकमा नै जानु पर्ने अवस्था पनि आउँन सक्छ । हामी त्यो अवस्थामा पुग्नु नपरोस् भन्नेमा छौँ । उहाँहरुले जबरजस्ती सडकै जाने बाध्यता सिर्जना गर्नुभयो भने त हामी कसरी उहाँहरुलाई नै समर्थन गरेर बस्न सक्छौँ र ? अहिले दशैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरुले हामीलाई छपक्क छोपेको छ । यो बेला हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्नेमा छैनौँ । त्यही भएर पनि छठसम्म हामी सरकारलाई कुर्छौ । उहाँहरुले पनि देशको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि सकारात्मक कदम चाल्न सक्नुहोस । यदि होइन भने त हामी आन्दोलनमा जानुको अर्को विकल्प हुँदैन । त्यतिबेला उहाँहरु पनि कहाँ पुग्नुहुन्छ । समयले नै बताउँछ । हामी समर्थनको मात्र गीत गाएर हिड्न सक्दैनौँ । हामीले समस्या समाधानको कुरा उठाउँदै आएका छौँ । हामीले रहरले आन्दोलन गरेको होइन । आन्दोलन गर्दा रमाईलो भएर पनि आन्दोलन गरेको होइन । हामीले आन्दोलन गरेको र अहिले सरकारलाई समर्थन गरेको समस्या समाधानका लागि हो । यो कुराको ख्याल उहाँहरुलाई होस भन्न मात्र हामीले खोजेका हौँ । उहाँहरु समस्या समाधानमा लाग्नु भएन भने त समर्थत स्वतः फिर्ता हुन्छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने नै छैन ।
लामो समयको संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान तपाईँहरुको जबरजस्ती कै कारण समस्यामा पर्ने संभावना भयो नि त ?
त्यस्तो होइन, हामीले संविधान नै चाहिँदैन कहिले भनेका छौँ ? हामीले त सबै वर्ग र समुदायका लागि हुने संविधान होस् भनेका छौँ । केहीका लागि मात्र हुने संविधानको हामीले विरोध गरेका हौँ । त्यही भएर नै हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको हो । संविधानका सबै कुरामा हाम्रो विमति भन्ने होइन । केही विमितिका बुँदा हामीले संशोधन गर्न भनेका छौँ । त्यो भएन भने हामी कसरी यो संविधान मानेर जान सक्छौँ ? हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामी माग पूरा गराउँने गरी आन्दोलनमा जान्छौँ ।
भारत भ्रमणपछि प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तपाईँहरुकै आग्रहमा उहाँले अमेरिका भ्रमण नै स्थगन गरेर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी तपाईँहरुका माग पूरा भएनन् वा गरेनन् भनेर भन्न मिल्ला र ?
हो, हामीले उहाँको अमेरिका भ्रमण स्थगन गर्न लगाएकै हौँ । उहाँलाई आन्तरिक समस्या हल नगरी अमेरिका भ्रमण जानु उचित छैन भनेपछि उहाँले स्थगन गर्नुभएको हो । तर, भ्रमण स्थगन गरे पनि हाम्रा मागका बारेमा भने गति सकारात्मक बनेको छैन । देशको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ । उहाँले भारत, चीन वा अमेरिका भ्रमण गर्नु भन्दा यो जर्जर भएको देशको समस्या समाधान गर्नु पहिलो र प्रमुख काम हो । यसमा उहाँ लाग्नुहोस हाम्रो आग्रह छ । होइन भने उहाँ कता–कता रमाएर बस्ने हामीले समर्थन छ है भन्ने रहने त कसरी हुन्छ ?
मैले अघि पनि भने । हामीले संविधान जारी भएपछि मधेसी, उत्पिडित र आदीवासी–जनजातीका पक्षमा संविधान भएन भनेर आन्दोलन गरेको सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । हामीले ती समस्या समाधानका लागि प्रचण्डलाई समर्थन गरेको हो । तर, उहाँहरुले पनि मधेसको मुद्धामा चासो नदेखाउनुले शंका उत्पन्न भएको छ । हामीले प्रचण्डजीलाई सम्झौताका आधारमा मत दिएको हो । उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने उहाँ नै समस्यामा पर्नुहुन्छ ।
असोज १८ गते ।
Previous Previous post: मालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चालिसे सहित पन्ध्रसय नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश
Next Next post: मोटी नायिकाको बढ्दो माग